Arjun Kapoor Iyo Parineeti Chopra Oo Wada Sameyn Doonan Filimka Vipul Shah Ee Namastey Canada - Hablaha Media Network
Arjun Kapoor Iyo Parineeti Chopra Oo Wada Sameyn Doonan Filimka Vipul Shah Ee Namastey Canada
HMN:- Arjun Kapoor ayaa Akshay Kumar ka badali doona taxanaha Namestay ee hori jilaagaan u sameeyay waxaan la xaqiijiyay in Arjun Kapoor hogaamin doono filimka Namastey Canada.
Arjun Kapoor filimkaan waxaa la sameyn doonto Parineeti Chopra filimkaan ayaana duubis lagu bilaabi doona goor dhow sida qorshaha yahay waxaa daafaha caalamka laga daawan doona sanadka danbe.
Arjun Kapoor ayaana saxaafada ku yiri ” aad ayaana ugu faraxsanahay la shaqeynta Vipul Shah oo hori la shaqeeyaya Amitabh Bachchan iyo Akshay Kumar waana ku faraxsanahay inaan sameeyo filimka Namastey Canada oo ah filim ka hadlaayo arimaha qoyska madadaalana leh.
Dhinaca kale Parineeti ayaa saxaafada u sheegtay ” inay ku faraxsantahay sameynta filimka Namastey Canada waana filim mudo raadinaayay waxaa kaloo ku farax sanahay la shaqeynta Vipul Shah oo aan xiriir wanaagsan wada laheyn sanadahaan danbe”.
Dhinaca kale filim sameeye Vipul Shah ayaa sheegay in filimka Namastey Canada aan aheyn qeybta labaad ee Namastey London asigoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in Akshay Kumar iyo asiga isla bixiyeen magaca Namastey Canada.
Sidoo kale Vipul Shah ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay la shaqeynta Arjun iyo Parineeti asigoo sheegay in filimkaan uu noqan mid ka mid ah filimadooda ugu wanaagsan.
Arjun iyo Parineeti oo wada shaqeyn ugu danbeysay 5-sano ka hor filimkooda Ishaqzaade waxaa kaloo u diyaarsan oo ka wada sameyn doonan filimka shirkada Yash Raj Films ee Sandeep Aur Pinky Faraar.